Monday June 18, 2018 - 21:37:59 in Wararka by Super Admin
Warkii kasoo yeeray R/wasaaraha Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa gilgilay siyaasadda dabadhilifnimada oo ay ku shaqeyso dowladda Federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Markii warbaahinta caalamiga ah iyo midda Maxalliga ah faafisay warka kasoo baxay R/wasaaraha Itoobiya ee uu ku xaqiijiyay in Soomaaliya la hoos geynayo Addis Ababa ayaa Jawaab celinno kala duwan laga bixiyay.
Wasiirka Warfaafinta DF-ka Daahir Maxamuud Geelle ayaa si axmaqnima ah uga hadlay dhawaqa Abeey Axmed wuxuuna sheegay in warkaas uu Itoobiya gaar u yahay "warka kasoo yeeray R/wasaaraha Itoobiya waa mid gaar u ah wadankiisa,annagu waxaan shacabka u xaqiijineynaa in Soomaaliya tahay dal madax banaan" ayuu yiri Geelle.
Wasiirkan dabadhilifka ah wuxuu isku dayay in uu duug duugo oo uu qurxiyo heshiiskii khiyaanada ahaa ee maalmo ka hor lagu saxiixay magaalada Muqdisho wuxuuna ku sifeeyay heshiis taariikhi ah oo labada dal ay ku sameynayeen hanaan dhaqaale.
"Waa la isla soo qaaday, oo la isku afgartay in dekado la sameeyo, dekadahaas 4 dekadood ayey noqonayaan, oo ballaaran oo maalgeshi loo raadiyo, maal-geshiga waxaa laga yaabaa dadka marka ay maqlaan in labada dowladood ay maalgelinayaan laakin hey’adaha maalgelinta adduunka iyo dowladaha wax maalgeshido iyo shirkadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka labada dal ka soo jeeda" ayuu markale yiri Geelle.
Marka layskusoo xooriyo warka Wasiirka warfaafinta ayaa ahaa mid lagu dhagrayo shacabka Soomaaliyeed ee ogaaday xaqiiqda maamulka dabadhilifka ah ee Farmaajo iyo Kheyre madaxda ka yihiin, maamulkaasi oo dabadhilifnimadiisa banaanka usoo baxday.
Itoobiya waxay udamaashaaday in loo xalaaleeyay Afar dekadood oo Soomaali leedahay islamarkaana ay qorsheynayso in latirirto dalka Soomaaliya lana hoos geeyo Itoobiya.